Madaxweynaha Somaliland Oo Dhaqan Galiyey Xeerka Aasaasidda Guddida Hoggaaminta Diiwaan-Gelinta Muwaadinka - Somaliland Post
Ethiopia: Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka oo Bayaan ka soo saaray…
“Mulkiilayaasha Tv-yadu waa Ganacsato, iyaga iyo Ganacsatada Lacagta soo bixiyey waa…
Xukuumadda Somaliland oo Agab Caafimaad oo Kala Duwan u kala dirtay…
Wasiirka Gaadiidka Iyo Horumarinta Jidadka oo Kormeer Ku Tegay Waddada Isku…
Home News Madaxweynaha Somaliland Oo Dhaqan Galiyey Xeerka Aasaasidda Guddida Hoggaaminta Diiwaan-Gelinta Muwaadinka
Madaxweynaha Somaliland Oo Dhaqan Galiyey Xeerka Aasaasidda Guddida Hoggaaminta Diiwaan-Gelinta Muwaadinka
Hargaysa(SLPOST)Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa maanta Qalinka ku duugay digreeto uu ku Dhaqan-gelinayo xeerka Aasaasidda Guddida Hoggaaminta Diiwaan-gelinta Muwaadinka iyo Guddi Hawleedkeeda.
Digeertadani uu Maanta Madaxweyen Siilaanyo ku saxeexay Xeerkani ayaa waxa lagu faafiyey War-saxaafadeed maanta ka soo baxay Xarunta Madaxtooyada oo uu ku saxeexnaa Af-hayeenka Madaxtooyada Axmed Saleebaan Maxamed (Dhuxul), War Murtiyeedyadaasi ayaa u dhignaa sidan:-
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu Xeer Madaxweyne oo summadiisu tahay JSL/M/XERM/249-2296/032014, ku dhaqan-geliyey xeerka Aasaasidda Guddida Hoggaaminta Diiwaan-gelinta Muwaadinka iyo Guddi Hawleedkeeda.
Markuu Arkay: Qodobka 90aad iyo Qodobka 94aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland;
Markuu Arkay: Qodobka 3aad ee Xeerka Jinsiyadda, Xeer Lr. 22/2002 oo waajibinaya in muwaadiniintu helaan aqoonsiga muwaadinimo;
Markuu Tixgeliyay: Siyaasadda Golaha Wasiirradu ansixiyeen ee ay ku go’aamiyeen in la sameeyo Diiwaangelinta muwaadinka;
Markuu Arkay: Baahida loo qabo in la helo Diiwaangelinta muwaadinka oo laga sameeyo Dalka oo dhan si loo helo xog sugan;
Markuu Yaqiinsaday: In Diiwaangelinta Muwaadinka ay udub-dhexaad u tahay isla markaana fudaydinayso in la helo diiwaangelinta codbixiyaha oo u gogol xaadhaysa in la helo doorasho xor oo xalaal ah;
Markuu Xaqiiqsaday: In ay tahay daruuri in la sugo muwaadiniinta reer Somaliland si loo xaqiijiyo in ay codeeyaan muwaadiniinta oo keliya;
Markuu Garwaaqsaday: In la dardar-geliyo loona qabto hawsha Diiwaangelinta Muwaadinka si dhaqso ah;
Isagoo Maanka ku Haya: Ahmiyadda doorashooyinku ku leeyihiin Qaranka iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho xor oo xalaal ah;
Wuxuu halkan ku soo Saaray Xeerkan;
Aasaaska Guddida Hogaaminta Diiwaangelinta Muwaadinka
Waxaa Xeerkan lagu aasaasay Guddiyada soo socda:
Guddida Hogaaminta Diiwaangelinta Muwaadinka (Steering Committee) oo ka kooban:
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Guddoomiye.
Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada, Xubin.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga, Xubin.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare, Xubin.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga Ah, Xubin.
Wasiirka Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta, Xubin.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka, Xubin.
Ujeeddada Guddida Hogaaminta Diiwaangelinta Muwaadinka
Ujeeddada Guddida Hogaamintu waa hogaaminta iyo ka midho dhalinta habka diiwaangelinta muwaadinka.
Xilka iyo Waajibaadka Guddida Hogaaminta Diiwaangelinta Muwaadinka
Xilka iyo waajibaadka Guddida Hogaamintu waa:
Dejinta iyo xaqiijinta qorshayaasha Diiwaangelinta Muwaadinka.
Ansixinta qorshaha diiwaangelinta.
Hagidda iyo daba-galka guddi hawleedka lagu aasaasay Qodobka 1aad ee Xeerkan.
Ka-talo bixinta caqabadaha laga yaabo in ay soo food-saarto hawsha diiwaangelinta.
Ka-talo bixinta soo saarista Xeerarka, Wareegtooyinka iyo amarrada lagama maarmaanka u ah meel marinta diiwaangelinta.
Aasaaska Guddi Hawleedka Diiwaangelinta Muwaadinka
Guddi Hawleedka Diiwaangelinta Muwaadinka (Task Force) oo ka kooban:
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Guddoomiye.
Maareeyaha ICT Commission, Xubin.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Madaxtooyada, Xubin.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Maamul Wanaaga, Xubin.
Garyaqaanka Guud ee Qaranka, Xubin.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Xubin.
Dr. Maxamed Cabdi Daa’uud, Xubin.
Ujeeddada Guddi Hawleedka
Ujeeddada Guddi Hawleedku waa meel marinta siyaasada iyo ka midho dhalinta qorshayaasha Guddida Hogaaminta.
Xilka iyo Waajibaadka Guddi Hawleedka
Xilka iyo waajibaadka Guddi Hawleedku waa:
Fulinta siyaasadda iyo qorshayaasha Guddida Hogaaminta Diiwaangelinta Muwaadinka.
Fulinta hawl-maalmeedka Guddida Hogaaminta Diiwaangelinta Muwaadinka.
La socodsiinta iyo uga warbixinta Guddida Hoggaaminta Diiwaangelinta habka ay u socoto Diiwaangelintu.
La socodsiinta iyo uga warbixinta Guddida Hogaaminta Diiwaangelinta Muwaadinka caqabadaha farsamo ee soo foodsaari kara hawsha diiwaangelinta iyo soo jeedinta talooyinkooda la xidhiidha caqabadahaa.
Labada Guddi waxay ku hawlgalayaan Xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo udub-dhaxaad u ah hawsha diiwaangelinta.
Dhawridda Xilliga iyo Nidaamka
Guddiyada waxaa la farayaa in hawsha lagu qabto wakhtiga loo qorsheeyey lana raaco Nidaamka Guddida Qandaraasyada Qaranka iyadoo la dhawrayo hanaanka iyo habsami u socodka shaqada.
Axmed Saleebaan Maxamed (Dhuxul)
SLpost - June 4, 2020